Izinto zokwenza e-Sun City Soho Hotel - Sun City
Izinto zokwenza e-Sun City Soho Hotel, Sun City
Zisebenzise ngokugcwele ububanzi obumangalisayo bemidlalo yezemidlalo nezokungcebeleka, izindawo zokudlela, imigoqo, nokuzijabulisa komndeni okunikezwa eSun City Resort.
Kunezindawo eziningi zemidlalo nezokungcebeleka eSoweto City Soho Hotel ezinamanzi ezinkundleni ze-tennis, izinkundla ze-squash, ukugibela amahhashi nemigwaqo yemvelo. Izifundo ezimbili zegalofu zegalofu, ezenzelwe uGary Player, zizokwenza inselele noma yikuphi ukuphephezela, ngakho-ke ujabulele umbono futhi uphumelele enselele.
Ukuzijabulisa okungapheli kungajatshulelwa ngesikhathi sokubalekelwa komndeni wakwaSun City. Ukuzijabulisa umdlalo ungajatshulwa kwi-Magic Company, imisebenzi yemfundo elindelwe ku-Animal World. I-Kamp Kwena inikeza ukunakekelwa kwezinga eliphezulu emhlabeni ngemisebenzi yemfundo yansuku zonke yezingane.
Hlola i-Kwena Gardens nomndeni futhi ujabulele imisebenzi eyingqayizivele enikezwa njengokubamba ingwenya yengane nokugcina isikhathi sabo sokudla. Ezinye izinto zibandakanya i-quad-ibhayisikili, izingosi zesitimela kwi-Stimela Train, igalofu elincane, ukuzingelwa kwengcebo kuGeneral Mining Store ne-Scratch Patch, nesikhathi se-movie yomndeni.
Isigodi samagagasi sinikeza imisebenzi eminye, kusukela ekufakeni amagagasi aphezulu wamamitha amabili ukuze uphumule ohlangothini oluwubucayi. Kunezinhlobonhlobo ezihlukahlukene zezindawo zokuhamba amanzi futhi yiqiniso ukubaluleka kokushona kwelanga echibini.
Ungazama njalo futhi ubone i-Big Five endaweni ehambisana nePilanesberg National Park kusukela emotweni evulekile noma uvele unikezele ukuba uhlotshiswe ngemithi yokwelapha, isikhumba kanye nobuhle ku-Gary Player Health Spa.
I-Sun City Resort ine-nightlife enhle kakhulu ongayithola ngesikhathi uhlala eSun City Soho Hotel. Danisa ubusuku ubheke emidlalweni ethile yomculo edlalwa yi-DJs eshisa kakhulu ku-Encore. Ukuze kusihlwa ngokukhululekile, ukudubula echibini, ubuke imidlalo yemidlalo yakamuva noma ujabulele iziphuzo nabangani baseVibes. Ukuzijabulisa okungajwayelekile kuyatholakala kwi-Gentleman's Bar.
I-Sun City Theatre inikeza imibukiso evelele embukisweni. Sebenzisa imali yakho yokudlela e-Orchid kanye ne-Calabash Restaurants, elandelwa yibukhoma bukhoma bese ungazami inhlanhla yakho eSun City Casino.
Hlaziya futhi uziphathe isikhathi esithile esidingekayo kakhulu se-Royal Salon. I-spa inezinhlobo ezihlukahlukene zokunethezeka kwe-spa nobuhle bezokwelapha. Emva komdlalo onzima wegalofu, vakashela i-Spa ye-Gary Player Spa ukuze unciphise imisipha yakho futhi avuselele amandla akho.
Khetha kusuka ezindaweni eziningana e-Sun City Soho Hotel ukugubha usuku lwakho lokuzalwa, lomshado, lokuzalwa komshado noma ukubalekelwa othandweni e-Sun City Hotel. E-Sun City Hotel uchithekile ngokukhetha ngezindawo zokudlela ezigubha ezincane noma obuseduze noma into ehlabayo.